भारतमा ४३ डाक्टरलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/भारतमा ४३ डाक्टरलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि
५ चैत एजेन्सी :भारतमा ४३ जना डाक्टरलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ।केरलास्थित एक अस्पतालमा कार्यरत ४३ जना डाक्टरलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ।
श्री चित्र तिरुनाल इस्टिच्यूट फर मेडिकल साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी तिरुवन्तपुरममा कार्यरत ती डाक्टरलाई अस्पतालको गम्भीर लापरबाहीका कारण भाइरसको संक्रमण देखिएको बताइएको छ। उनीहरु सबैलाई चिकित्सकीय निगरानीका साथ आइसोलेसनमा राखिएको छ।
विदेश राज्यमन्त्री भी मुरलीधरम मंगलबार एउटा उच्चस्तरीय बैठकका लागि उक्त अस्पतालमा गएका थिए। उनलाई पनि घरमै क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। ती संक्रमित देखिएका ति डाक्टरहरुसँगै उनले बैठक गरेका थिए।संक्रमितमध्ये एक जना डाक्टर गत मार्च १ मा स्पेनबाट फर्किएका थिए। त्यहाँ पनि उनलाई भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। तर, उनले फर्किएलगत्तै मार्च २ बाटै अस्पतालमा काम सुरु गरेका थिए।
यो घटनासँगै केरलाका मुख्यमन्त्री पिनारायी विजयनले अस्पतालप्रति रोष प्रकट गरेका छन् र, भनेका छन् ‘जो भयो यो धेरै नराम्रो भयो।’ उनले यसबारेमा अस्पतालसँग स्पष्टिकरण माग्ने बताएका छन्। धेरै डाक्टरहरुलाई एकैपटक भाइरसको संक्रमण भएपछि राज्यमा स्वास्थ्य जनशक्ति नै काममा आउन छोडेका छन्।
यसरी बनाउनु हाेस् मात्र दुइ मिनेट मै तपाईं`को पहेलो दाँत च`म्किलो ! पुरा पढी शेयर गर्नुहोस !!